Thwebula ConvertXtoDVD 6.0.0.81 – Vessoft
Isiqophi converters, Akwazi ukugcina
ConvertXtoDVD – an lula ukusebenzisa isofthiwe ukuguqula video ibe DVD format. Isofthiwe has a isethi ephelele amathuluzi ukudala ividiyo quality DVD. ConvertXtoDVD isekela ethandwa ifomethi, amafayela khamera futhi TV-tuners. Isofthiwe uyakwazi ukwengeza amathrekhi audio kanye izihlokwana ukuze ifayela, ulungise Izinketho zemibala, usike izingxenye engadingeki, uhlangane namanye video, njll ConvertXtoDVD iqukethe module okhethekile ukuze ulungiselele izinketho main software for izidingo umsebenzisi.
Usekela popular alalelwayo ifomethi
Burns ividiyo aguqukile on the DVD-esiphathiswa
Ukuhlela amafayela video
Preview of the impahla wadala
Kwakha imenyu DVD
Amazwana on ConvertXtoDVD:
ConvertXtoDVD Ahlobene software:
Abadlali Media Downloaders Umdlali obusebenzayo ukudlala amavidiyo high. Isofthiwe kwenza ukubuka iziteshi TV in the internet bese ulanda okuqukethwe kusukela ethandwa video amasevisi.
English, Français, Español, Deutsch... Auslogics File Recovery 7.1.2
English, Français, Español, Deutsch... Movavi Video Editor 12.2
Isiqophi converters An omuhle video umhleli kunothile ehlunga ezahlukene kanye nemiphumela ukuqedela ukucutshungulwa video amafayela uwagcine ezidingekayo abezindaba takhiwo.
English, Afrikaans, Українська, Français... IObit Uninstaller 6.2.0.934
System nokwenza Isofthiwe ukususa okungadingekile amafayela, ukwengeza kanye nenye imfucumfucu ohlelweni. Isofthiwe kwenza ukususa ulwazi kusuka ebhukwini futhi abuyisele uhlelo uma kuphahlazeka.
English, Українська, Français, Español... Samsung Kies 3.2.16084.2 futhi 2.6.4.16113
Hambayo Isofthiwe synchronizes computer yakho namadivayisi Samsung yenkampani. It has amathuba abanzi ukusebenza namadivayisi futhi isekela izinhlobo ezahlukene uxhumano.
English, Українська, Français, Español... Teamviewer 12.0.72365 Standard, QuickSupport futhi Portable
Ukungena kokukude Ithuluzi for elawulwa kude computer lapho uxhumekile kwi-inthanethi. Kukhona kungenzeka ikholi yevidiyo kanye exchange of amafayela.
English, Українська, Français, Español... Trillian 5.6
Chat Isofthiwe ukushintshanisa imiyalezo nge abasebenzisi nezinye amaklayenti chat. Futhi isekela ikhono kanyekanye ukuxhuma kumanethiwekhi amaningi for imiyalezo.